I hereby hope and pray that Former General Shwe Mann will follow the right path of his cousins: Fidel Valdez Ramos of Philippines and Susilo Bambang Yudhoyono of Indonesia | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ်တွေ ဗလီတွေမှာ ခြေကုပ်ယူ၊ လူစုပြီး၊လှုံဆော်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဂျေဟဒ် မြန်မာတွေခံနေရပြီ
မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့အား ရှေးမြန်မာမင်းများက ချီးမြှင့်ခဲ့ပုံ »
I hereby hope and pray that Former General Shwe Mann will follow the right path of his cousins: Fidel Valdez Ramos of Philippines and Susilo Bambang Yudhoyono of Indonesia
Thinking out of the box or Lateral thinking ….
I hereby wish to remind my NLD, International and Muslim Friends that the present in-fighting in NLD may beaSTAGED-SHOW presented and directed by the Sr General Than Shwe and acted accordingly by Min Aung Hlaing, U Thein Sein and U Shwe Mann…
After loosing 1990 GE and 2012 By-election, Myanmar Military Generals and USDP leaders understand that they have no hope of winning until and unless they cheat and rig the coming election. But the International authorities and the people of Myanmar would punish them dearly.
They now understood that they could not divert the significant amount of votes from NLD by using the 969 Ma Ba Tha’s extremist ultra-Nationalists.
So, with the co-operation agreement with DASSK led NLD, Shwe Mann led USDP Generals could get some place in the government to protect Sr General Than Shwe, present and retired Military Generals.
But for the ordinary citizens of Myanmar, NLD, Ethnic Minorities and Muslims of Myanmar…this is the only hope of peace, prosperity and democratic transformation of Myanmar.
I hereby hope and pray that Former General Shwe Mann will follow the right path of his cousins: Fidel Valdez Ramos of Philippines and Susilo Bambang Yudhoyono of Indonesia in transforming the country intoamore mature and true democracy.
We all must pray and hope for the BEST and also prepare to face the worst for our beloved mother-land Myanmar.
This entry was posted on August 19, 2015 at 6:21 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “I hereby hope and pray that Former General Shwe Mann will follow the right path of his cousins: Fidel Valdez Ramos of Philippines and Susilo Bambang Yudhoyono of Indonesia”
August 19, 2015 at 7:45 am | Reply
I just read this @ 3.45 PM 19.8.13…”သူရဲကောင်း လိုချင်လို့၊ ၀န်းရံပေးနေတာပါလေ”
ဦးရွှေမန်းငါးမျှားချိတ် အိုင်ဒီယာကို မိတ်ဆွေတချို့က ရေးသားကြတာ ဖတ်ရ၊ သဘောတူရပါတယ်။
ဦးရွှေမန်းဟာ ငါးမျှားချိတ်မှာ တပ်ထားတဲ့ အစာပဲ ဖြစ်မယ်၊ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ NLD ကိုတောင် စိမ့်ဝင်၊ ၀ါးမြိုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီး ထားကြဟန်တူတယ်။ ခုကတည်းက ဦးပိုင်ဟောင်းတွေကော၊ မဆလ၊ ကြံ့ဖွံ့ဟောင်း၊ တပ်ထွက်၊ ဗိုလ်ကျ တစီစီဖြစ်နေပြီ၊ မာမီကြီး မရှိတဲ့တနေ့မှာ NLD ဟာ စစ်ဗိုလ်ပါတီဖြစ်ပေဦးမယ် လို့ တွက်ချက်ပြတာ အင်မတန် သဘောတွေ့၊ သဘောကျ ရပါတယ်။
သို့သော်လဲ မန်း စိန်အကွဲအပြဲဟာ တကယ်ဟုတ်မဟုတ်၊ သဏ္ဍန်လုပ်သရုပ်တူတဲ့ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ ရှုံးအောင်ကို သရုပ်ဆောင်ပြခြင်း ဟုတ်မဟုတ်၊ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ဖို့ရာ မန်း ကိုယ်တိုင် အဲဒီစိန်အစိုးရနဲ့ မအလ တပ်မတော်ကြီးရဲ့ အတွင်းကျကျဖေါက်ပြန်တာ၊ ကမ္ဘာချီ ထိပ်လန့်တုပ်လှုပ်သွားစရာ မိတ္ထီလာလူသတ်မှု၊ တောင်ကုတ်လူသတ်မှု၊ စစ်တွေလူသတ်မှုတွေကို
ပါဝင်ကြိုးကိုင် ကျူးလွန်ခဲ့တာမျိုးတွေကို ဖေါ်မယ်ဆိုရင်တော့၊ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြု သူကောင်းပြုဖို့အသင့်ပါ။
အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ၊ လက်နက်မပါ လူချည်းလာပြီး၊ အလင်းဝင်လာရင်တော့ ဂျောင်း ထောင်ထဲကို၊ လက်ခံစရာ အကြောင်းမရှိ၊ ဧည့်ခန်းဆောင်ကျက်သရေတိုက်မှာ အခန့်သားထိုင်ချင်ရင်၊
ထိုင်နိုင်လောက်အောင်၊ စိန်အစိုးရ နဲ့ မအလတပ်မတော်ရဲ့ အတွင်းရေးတွေကို ဖေါ်ပြီး၊
ဖွင့်တိုက်ပေးဖို့ လိုကြောင်း၊ အဲဒီလို တိုက်စေချင်တဲ့အတွက် ၀န်းရံနေရတာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့၊
မန်းတို့အုပ်စု ကြားဖို့၊ သိဖို့ ပြောကြား လိုက်ပါရဲ့လေ။
ဒီဘက်ခေတ် တပ်ကနေ (၈၈၈၈လွန်ကာလ) ကူးလာ၊ ပြောင်းလာတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ ဆိုတာ၊ ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်းတို့၊ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်တို့လို လူတွေကိုပဲ သတ်မှတ်နေရပါကော။
ပြည်သူ့ဘက်တော်သား၊ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား ဆိုတာ ကြွေးကြော်ပြရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင်ကို အထိနာအောင် တိုက်ပြဖို့လည်း လို ပါသောကော။
နို့မို့ဖြင့် ခြံခုန် အချောင်ခို ထမီခြုံရုံသက်သက်နဲ့ လဒ ပဲ ဖြစ်ပေရော့မလေ။
ဒီဘက်က သူရဲကောင်း ပဲ လိုချင်ပါတယ်။ သူရဲကောင်း ဖြစ်၊ မဖြစ်၊ တိုက်ပွဲ နဲ့ စစ် ရမှာပါပဲ။
August 19, 2015 at 1:40 pm | Reply
Naing Soe added5new photos.
Komodo dragon လို့ ခေါ်တဲ့ ဖွတ်အကြီးစား
မျိုးဟာ ကမ္ဘာမှာ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ဩစတြေးလျ
မှာပဲရှိတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ အများအပြားရှိပြီး
အရွယ်အစားက (၁၀) ပေကျော်နှင့် ပေါင်ချိန်
(၁၅၀) ကျော် ရှိတတ်တယ်။
အင်ဒိုက Komodo, Rinca, Flores, Gili
Motang နှင့် Padar ကျွန်းတွေဆိုတာ အဲဒီ
ဖွတ်အကြီးစားတွေ နေတဲ့ ကျွန်းတွေ ဖြစ်တယ်။
ဒီဖွတ်တွေဟာ အစုံသား သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ပြီး
ခလေးငယ်တွေ လူတွေကိုလည်း မကြာခဏ
သွားတွေမှာ အဆိပ်ရှိတာကြောင့် ကိုမိုဒိုဖွတ်
ကိုက်ရင် ပြေးလို့မရဘဲ အဆိပ်ရှိန်ကြောင့်
လှုပ်မရလို့ လဲနေတုန်းမှာ သားကောင်ကို
အရှင်လတ်လတ်လည်း စားလေ့ ရှိတယ်။
တောရိုင်းတိရိစ္ဆန် သဘာဝဆိုတာ ဆာလောင်
မွတ်သိပ်မှ သားကောင်ကို လိုက်လေ့ ရှိပေမဲ့
ကိုမိုဒိုဖွတ်ကတော့ ဆာဆာ၊ မဆာဆာ အမဲ
လိုက်လေ့ရှိပြီး မဲမဲမြင်ရာ ကိုက်ဖြတ် ဖျက်ဆီး
တိရိစ္ဆန်ထဲမှာ စည်းမရှိသူ၊ ယုတ်ကန်းသူ၊ ညစ်
ပတ်သူ၊ အချောင်ဝင်နှိုက်တတ်သူ၊ စားမာန်
ခုတ်ပြီး အချင်းချင်း ကိုက်တတ်သူ စသဖြင့်
ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာက မသိလိုက်တာက အင်ဒိုမှာပဲ
“ဖွတ်” တွေရှိတယ် ထင်နေကြတာ တကယ်တော့
ဗမာပြည်မှာ ကိုမိုဒိုဖွတ်ထက် ပိုအောက်တန်းကျ
တဲ့ “ကြံ့ဖွတ်” တွေ ရှိတာ မသိကြဘူး ဖြစ်နေတယ်။
အာဏာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဇတ်တူသား စားလာ
တာ ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့ အစဉ်အလာ ယဉ်ကျေးမှု
ဒီအစဉ်အလာကို ယနေ့အထိ ထိန်းထားနိုင်တာ
မျိုးချစ် ဗမာ့တပ်မတော်သားတွေ အတွက် ဂုဏ်
ယူစရာကောင်းသလို သားစဉ် မြေးဆက် လက်ဆင့်
ကိုယ်ကျိုးစီးပွါး ကာကွယ်မှုသာရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ
ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်မှု ဆိုတာ မရှိသလို ရွေး
ကောက်ပွဲ ဆိုတာလည်း သူတို့နိုင်ရင် ကောက်
မယ်၊ မနိုင်ဘူး ထင်ရင် အရှက်မရှိ မျက်နှာနဲ့
ပေကပ်ကပ် လုပ်မယ်၊ အချိန်ဆွဲမယ်၊ ညစ်ပတ်
မယ်၊ ဖမ်းမယ်၊ မနိုင်မချင်း အသစ် ပြန်လုပ်မယ်။
ပြသာနာက ဒီလို ခွက်စောင်းခုတ်၊ ညစ်ပတ်တဲ့
“ဖွတ်” တွေကို အတိုက်အခံပါတီကြီးက ယုံကြည်
တယ် ဆိုတော့ လူထုကလည်း လိုက်ယုံကြတာ
အခုဆို “ကိုဋ္ဌေးဦးကို ကျမ ယုံတယ်” ပြောဦး
မိမိ နားလည်တာကတော့ ကိုယ့်တပ် ကိုယ်ချနင်း၊
ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုယ် သစ္စာဖောက်၊ ငါတကောကောပြီး
စစ်အုပ်စုနဲ့ ပေါင်းတာ လုံးဝ မှားတယ်။ တက်တက်
စင်အောင် လွဲတဲ့ ရှုံ့ချီ နှပ်ချီ နိုင်ငံရေး ဖြစ်တယ်။
အတိုက်အခံဟာ အတိုက်အခံလိုပဲ နေရမယ်။
ဗိုလ်ရွှေမန်းနဲ့ ပေါင်းပြီး အခုလို မလိမ့်တပတ်နဲ့
အာဏာကို ဖြတ်လမ်းက ဝေ့ဝိုက်လည်း ယူစရာ
မလိုသလို သူတို့အကြိုက်လိုက်ပြီး လူထုကို
ယခင် “ဒီချုပ်” စဖွဲ့စဉ်ကလို “မတရားတဲ့ အမိန့်
အာဏာ ဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ” ဆိုတဲ့
အာဏာရဖို့၊ သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ မလိုဘူး။
တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ အုတ်မြစ် ခိုင်ခန့်အောင်
လုပ်ပေးခဲ့ရမယ်။ အသိ အမြင် အတွေးအခေါ်တွေ
အာဏာလိုချင် သူတို့နဲ့ ပေါင်းလိုက်ဆိုတာ
ခလေးတောင် လုပ်တတ်သလို ဒီလို ပေါင်းစားမှ
အာဏာရမယ်ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာကို လမ်းပြခဲ့ဖို့
ပေါင်းစား၊ မြှောက်စား၊ ဘောမစားနေကြတဲ့
လမ်းဘေး လူတန်းစားထဲ ကိုယ်ပါ ပါနေတော့
လက်လွှဲပေးနိုင်မဲ့ အရည်အသွေးမီ လူတွေ
ရှိပြီလား။ မရှိဘူး။ ရှိတဲ့ လူတော်လူကောင်း
တွေကိုလည်း ကန်ထုတ်လို့ ကုန်ပြီ။
စစ်အုပ်စုမှာ တဗိုလ်ကျ တဗိုလ်တက် စနစ်တကျ
ကာချုပ် ဂျပု (မအလ) လို “မအလ” တွေ ရိုက်သတ်
ဒီချုပ်အနေနဲ့ ကိုယ့်တပ် ကိုယ် ပြန်စုစည်းပါ၊
လူထုကို အားကိုးပါ၊ လူထုကို ယုံပါ၊ လူထုဘက်
ဘက် လိုက်ပါ၊ အလုပ်သမား ကျောင်းသား
လွှတ်တော် နိုင်ငံရေး ဆိုတာ “ဆောက်ဖြစ်မှ
ကျောင်းဒကာ” ပါ။ ဆောင်းအိပ်မက် တခုပါ။
စစ်အုပ်စုကွဲတာ “ကိုယ်ကျိုး စီးပွါး ခွက်စောင်း
ဒီမို အင်အားစုကွဲတာ “နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ် အတွေး
အခေါ် ကွဲတာ” ရန်သူ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည် မျက်
အာဏာရှင် ဗိုလ်သန်းရွှေ မသေ သေးသ၍
ဘယ်သူ့ ဆီကိုမှ အာဏာမလွှဲဘူး။
ထိုနည်းတူ သူသေပြီး နောက်တက်မဲ့ “မအလ”
တွေကလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်မှာပဲ။
ပူးသတ်မယ်၊ ပေါင်းသတ်မယ်၊ ဖျောင်းဖျမယ်၊
ပြုပြင်ယူမယ် ဆိုပြီး နောက်ဆုံး ကိုယ်သာ အပြု
အပြင် ခံလိုက်ရတာ အဖတ်တင်တယ်။
မဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းသားထု တရပ်လုံးရဲ့
ထောက်ခံမှု ကျဆုံးသွားတာကို ပြောချင်တာ။
ဒင်းတို့နဲ့ညှိ၊ ဒင်းတို့အကြိုက် လိုက်လုပ်ပြီး
“ထင်” တလုံးနဲ့ ငါတကောကောတဲ့ ရလဒ်
အဖြေ ထွက်လာတာ ဘာလဲ ဆိုတာ နောင်
နှစ်ခါ မှားထားတာနော်၊ နောက်တကြိမ်ပဲ
အခုအခြေအနေက မတော်လို့ ဗိုလ်ရွှေမန်းကများ
သူ့အသက် အိုး အိမ် စည်းစိမ် ကာကွယ်ဖို့အတွက်
“ဟုတ်ပါတယ် သူနဲ့ကျနော် ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ ကြံ
စည် ထားပါတယ်၊ ပလန်ကတော့ ဒီလိုပါ ခင်ဗျ” လို့
ဖော်ကောင် လုပ်လို့ “မတရားအသင်း” ကြေငြာခံ
၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၅။
August 21, 2015 at 8:52 am | Reply
နေ၀င်းကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ဖမ်းခဲ့တယ်။
ခင်ညွှန့် ကို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ ဖမ်းခဲ့တယ်။
ရွှေမန်းကိုကျတော့ ….. ။
August 22, 2015 at 3:14 am | Reply
I commented on EMG boss Dr Than H Aung’s trip back to Ygn from USA…Once U Shwe Mann is not detained and allow to meet DASSK and continue in Parliament…I just feel that U may be safe to go back home…All these may be justa“staged show” scripted by the Myanmar Military propaganda unit.